AH: 2nd Anniversary
Posted by AH at 11/22/2011 05:49:00 PM
မဒမ်ကိုး November 22, 2011 at 8:19 PM
ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးရင် သူပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေပါလိမ့်မယ် .
ဒီလင်ဒီမယား အသက်ရာကျော်ရှည်လို့ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပြီး
လိုတိုင်းတ ရ၍ ပျော်ရွှင်ခြင်းအတိပြီးပြည့်စုံပါစေ .
ဆွဲလဲရတနာ ခေါင်းလောင်းရတနာများလဲ ထွန်းကားပါစေ.လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် အကိုရေ ..
blackroze November 22, 2011 at 8:37 PM
စံပယ်ချို November 22, 2011 at 10:56 PM
နှစ်ကြီးသမားမို့ပါ...နှစ်ကြီးလေ အချစ်ကြီးလေတဲ့ မှတ်ထားဦး
TZH1985 November 22, 2011 at 11:33 PM
ပျော်ရွှင်သောနှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပါစေလို့ အရင်ဆုတောင်းပါတယ်။ အခုပိုစ့်ကို စပါယ်ရှယ်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ စင်ကာပူလာဖြစ်ရင် သေချာပေါက် လက်တို့လိုက်စမ်းပါဗျာ... စကားပြောကြရအောင်...
ကိုရင် November 23, 2011 at 2:03 AM
နောက်နှစ် နောက်နှစ်တွေအထိ အခုလို ပိုစ့်ကို လာမန့်ဦးမယ်ဗျာ..
...အလင်းစက်များ November 23, 2011 at 3:32 AM
ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ ရန်ဖြစ်.... အဲလေ..... ချစ်ကြသပေါ့။ ကောင်းပါလေ့ဗျား။
Maung Myo November 23, 2011 at 11:01 AM
လူပျိုလေးထင်နေတား) စွံသွားတာဖြင့် ၂ နှစ်တောင်ရှိနေပြီပဲ အားကျချက်
ရတုအဆက်ဆက် ချစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 23, 2011 at 1:52 PM
ပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်ရေး သက်တမ်းရှည်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်
mstint November 23, 2011 at 8:25 PM
Happy Wedding Anniversary Mr. & Ms AH,
နှစ်နှစ်မှအစပြုလို့ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်ခင် ကြင်နာ နားလည်မှုလေးတွေ ဆထက်ပိုးတိုးလို့ တွဲလက်မဖြုတ်စတမ်း ခိုင်မြဲနိုင်ကြပါစေနော်။